Indlu yaseHillside - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNed
I-Hillside Cottage isandula ukulungiswa, izisela umoya omtsha kunye nopholileyo wokuhlala kwakho kumaphandle aseLimerick anoxolo. Ibekwe kwimizuzu nje esi-7 ukusuka e-Adare, yenye yeelali ezintle zaseIreland, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla, ukuphumla, kunye nokujonga indawo entle yasekhaya kunye neendlela zokuhamba intaba. Ngezindlu ezifulelwe ngengca ezidumileyo zase-Adare, iindawo zokutyela, kunye neendawo zentengiso, iKnockfierna Hill ekufuphi, kunye nehlathi lethu labucala, uya kuba nokuninzi kokuzigcina ukonwabisa!
Umbuki zindwendwe ngu- Ned
I-Hillside Cottage isandula ukulungiswa, izisela umoya omtsha kunye nopholileyo wokuhlala kwakho kumaphandle aseLimerick anoxolo. Ibekwe kwimizuzu nje esi-7 ukusuka e-Adare, yenye…